डा. केसीसँग मध्यरात ८ बुँदे सहमति, जुम्लामा एमबीबीएस पढाई हुने — onlinedabali.com
डा. केसीसँग मध्यरात ८ बुँदे सहमति, जुम्लामा एमबीबीएस पढाई हुने
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच राति अविर सहमति भएको छ । शुक्रबार तर्केको सरकार शनिबार राति वार्तामा बस्न तयार भएको थियो । सरकारी वार्ता टोली संयोजक गोपी मैनाली र अनसनरत डा. केसीबीच ८बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सरकार र डा.केसीबीच कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी वर्षबाट एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । अन्यत्र २०८० फागुन १० भित्र पढाई सुरु गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
अछामस्थित बयलपाटा अस्पताललाई सरकारी बजेटको व्यवस्था गर्नेलगायतका सहमति भएका छन् । तर कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी छ । सरकारीसँग सहमति भएसँगै डा. केसीले अहिले ९ बजे अनसन तोड्ने तयारी गरेका छन् ।